Ryan Philip dia nambenana tao amin'ny hopitaly iray any Californie niaraka tamin'ny ratra mafy teo amin'ny tongotra. Ilay mpilalao sarimihetsika 42 taona dia nampiahiahy ny mpankafy azy, nametraka ny sary Instagram tao amin'ny paroasy.
Tamin'ny alahady, teo amin'ny pejin'i Ryan Philippe, nisy sarin'ny mpilalao sarimihetsika iray voatifitra teo amin'ny tambazotra sosialy. Tsy lazaina, tena lehibe ny fahasimbany, hoy izy nanoratra:
"Ho sitrana haingana aho ary hankasitraka ny ahiahinao."
Ryan Philippe tany amin'ny hopitaly any Kalifornia
Ora vitsivitsy taty aoriana, namoaka sary roa miafina tao amin'ny Instagram ilay mpilalao sarimihetsika. Ao amin'ny iray amin'izy ireo dia aseho ny tanany, nofehezina amin'ny patch, ary ny iray kosa - ny tongotra mifamatotra. Rehefa nandinika ny zavatra hitany izy, dia nangataka azy ireo ny mpanjifany mba hanazava ny zava-misy, izay tsy nampahafantariny ny antsipirian'ny zava-nitranga.
Tricks tsy nahomby?
Ankehitriny, ny vadin'ny lehilahy Reese Witherspoon dia miasa amin'ny fizarana faharoa amin'ilay andian-tantara "Shooter", izay notifirina tany an'efitra akaikin'i Palmdale. Tamin'ny herinandro lasa teo, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety iray, nilaza ilay mpilalao fa ny ankamaroan'ireo tricks, izay nilalao ny anjara andraikitry ny milisy Bob Suegger teo aloha, dia nanatontosa ny tenany, noho izany, mazava ho azy, naratra i Ryan tamin'ilay sety, nanolo-kevitra ireo mpampiasa.
Ryan Philippe, 42 taona
Saribakoly iray avy amin'ny filalaon'ny mpilalao "Shooter"
Ny zanakavavy Reese Witherspoon no lasa voalohany indrindra tamin'ny baolin'i Paris
Ny vadiny taloha Reese Witherspoon dia nanjary niharan'ny fanendrikendrehana
Ampiantsika, ny fotoana farany i Filipo dia niseho ampahibemaso tamin'ny 11 Jolay. Niaraka tamin'i Joey Lynn King, mpilalao sarimihetsika izy, dia nametraka teo amin'ny boaty sary tamin'ny fampisehoana voalohany tamin'ilay horohoron-tany "Casket" tany New York.
Joey Lynn Mpanjaka sy Ryan Philippe
Kara Delevin namerina ny feon'i Monica avy amin'ny andiany "Friends"
Ny fiainan'i Luc Evans
Emily Ratjakovski dia nanambady
George Clooney, Julia Roberts sy Gwen Stefani dia lasa vahiny ao amin'ny "Carpool Karaoke"
Ilay mpihira Lily Allen dia nanapa-kevitra ny hisaraka
Rihanna sy Missy Elliott dia mitady mpiara-miasa tsy hita
Angelina Jolie dia nandamina ny Taombaovao ratsy indrindra ho an'i Brad Pitt
Leonardo DiCaprio ho zaza
Niverina an-tsokosoko ireo namana taloha: i Ben Affleck sy Matt Damon no namorona ny andian-tantara
Ny Weeknd dia nandany fotoana niaraka tamin'ny olon-tsy fantatra tany an-trano
Tarkan dia nanambady!
Ny biography of Tom Cruise
Mainty ny lohataona
Justin Timberlake dia nandeha nanarato
Anarana amin'ny hamsters
Toast amin'ny mikrô
Persimmon amin'ny sakafo
Ny sakafo malaza indrindra
Famaritana ny tratra
Jessica Biel dia nanangana ny onjam-peo momba ny Sexual Education
Jennifer Lopez dia mitoroka mponina any New York amin'ny sary tsy ampoizina
Lymphonoduses eo ambanin'ny trompetra
Singa simika ao amin'ny vatan'olombelona
Cartoons momba ny saka
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny rafi-batan'olona iray sy ny rafitry ny fotony?
Ny vaovao momba ny maha-bevohoka an'i Amal Clooney dia lasa "duck"
Ahoana no handroahana ny vatana amin'ny vavony?
Sepia - homéopathie
Rakitra voatabiha amin'ny ovy